Valisoa ny anarako,32 taona.Efa 2 taona no nanandrana ny hiteraka. Natao ny blog mba hizarako sy handrefesako ny lalana izay hataoko amin’ny hanaovanay IVF ( in-vitro fertilization).
Misaotra anao mialaho ny namaky sy manaraka ny asasoratrako .Afaka mandray anjara enao amin’ny alalan’ny fametrahana hafatra.
Marihiko fa tsy mampiasa intsony ilay blog taloha aho fa ity no blog vaovao ampisaiko.
Anio 21 jolay 2015 Salama e! Androny dia faha-11 androny ny nanaovana anilay embryon tranfer tato amiko. Ka rampitso 22 Jolay no hanaovana ny test de grossesse volohany. Androany aho dia hiresaka amina oe ina dahalo ny zavatra niseho tao anatiny zay 11 andro izay sy inona fanafody nohaniko. Ny rehetra ho zaraiko dia experienceko … More 10 andro nodiaviko taorina Embryon transfer
Leave a comment 10 andro nodiaviko taorina Embryon transfer
Zoma 15 jolay 2016 Salama. Niverina sahady aho,aleo mako lazaiko aminareo mialohany ny tohiny ilay tantara. Andao resahina volohany ny hafatrany ny dokotera amin’ilay azo atao sy tsy azo atao. Ny tsia azo atao : nanamafy tamiko ilay mpitsambo mpanampy fa tsy azoko ataony ny – manao piscina (milomano) -sauna ( zaho ary tsy mpanao … More Ny azo atao sy ny tsia aorina ET
Leave a comment Ny azo atao sy ny tsia aorina ET
salama e! Androny aho va afaka hanotra sy hitantara lay ET (embryon transfer) zay nataoko tamin’ny talata 12 volana jolay teo, efa ho 2 taona mahery kely no niandrasako anio an. Andao ary ho tantaraiko aminao ny fizotra ny ET nataoko . Talata 12 Jolay 2012. Tamin’ny 11:10 ny fotoana hihaonako amin’ilay dokotera tao clinic … More 12 Jolay 2016 : Embryon transfer
Leave a comment 12 Jolay 2016 : Embryon transfer